Okudilivwayo : Mozambique MZ
Ezemidlalo & Amathuluzi
Imithwalo & Izinto Zohambo
I-Ultimate International Shopping Experience Platform yamazwe ngamazwe e-Mozambique
Izigaba Zomkhiqizo Othengiswa Kakhulu ku-Ubuy Mozambique
Esinye sezitolo ezingcono kakhulu ze-inthanethi e-Mozambique
I-Ubuy ingesinye sezitolo ezingcono kakhulu ze-inthanethi e-Mozambique. Sihlinzeka ngemikhiqizo ehlukahlukene yamazwe ngamazwe emhlabeni jikelele. Ingosi yethu ilungele amakhasimende kakhulu futhi izinsiza ziyashesha futhi ziyanelisa. Ukuthenga kumnandi futhi kuyajabulisa e-Ubuy. Sisebenzelana nemikhiqizo yekhwalithi ephezulu ehlangabezana nezindinganiso zethu eziphakeme ezihambisana nesevisi emangalisayo ukuze siqinisekise injabulo yamakhasimende.
South Africa Algeria Angola Cameroon Cote dIvoire Ethiopia Ghana Kenya Madagascar Mauritius Nigeria Senegal Tanzania Tunisia Uganda Zambia Zimbabwe Burundi Seychelles Benin Central African Republic Republic of the Congo Botswana Libya Rwanda Malawi Togo The Gambia Burkina Faso Niger Namibia Mauritania Mali Lesotho Liberia Guinea Guinea-Bissau Gabon Djibouti Chad Réunion Saint Helena Cape Verde Equatorial Guinea Sierra Leone São Tomé and Príncipe Comoros Buka Wonke Amazwe
imigoqo & imibandela